महिलाका स्तन किन बराबरका हुँदैनन् ? यी हुन् कारण - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १४, २०७२ समय: १६:२४:१६
एजेन्सी । स्त्रीको सबैभन्दा आर्कषक अंग हो स्तन । चाहे त्यो महिलाका लागी होस् वा पुरुषका लागी नै किन नहोस् । चाहे त्यो कुनै सौन्दर्य प्रतियोगीतामा होस् वा पौडी पोखरीमा वा अन्य समयमा युवतीको स्तन पहिलो हेराई नै रोजाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तर पनि हत्तपत्त यिनको आकार सुन्दरतामा मानिस हराउने हुनाले यसको साइज समान हुँदैन भन्ने धेरैलाई पत्तै हुँदैन ।
चिकित्सकका अनुसार पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिलाका दुइ स्तन मध्ये दुवै बराबर कसैको पनि हुँदैन । दुई स्तन मध्ये एउटा ठूलो र एउटा सानो हुन्छ । जुन आकार आकार प्राकृतिकरुपमा नै बढाउन सकिन्छ ।
६. संसारमा सबैभन्दा ठूला स्तन अमेरिकाको टेक्ससमा बस्ने ३४ वर्षीया मोडल शेला हर्शलका छन् । उनले आफ्नो स्तनलाई ९ पटक सर्जरी गरेर घडप्प्प् बनाएकी छिन् ।